Vaovao - Miatrika toe-javatra vaovao ny fitaovam-pitsaboana ao Shina amin'ny 2021
Mijoro eo amin'ny sampanan-tantara eo amin'ny tanjona "zato taona", miatrika toe-javatra vaovao ny indostrian'ny fitaovam-pitsaboana sinoa sy ny fizotran'ny lalàna mifehy. Wang Zhexiong, talen'ny Sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso fanafody amin'ny fanjakana dia nilaza fa amin'ny 2021, mba hahazoana antoka fiandohana tsara sy fanombohana tsara amin'ny "Drafitra Dimy faha-14", ny sampana fanaraha-maso ny fitaovana fitsaboana dia hampihatra ny izay vao nohavaozina "Fitsipika momba ny fanaraha-maso sy fitantanan-drakitry ny fitaovana fitsaboana" ary manohy manamafy ny fananganana lalàna sy lalàna, mandray ireo fepetra "henjana indrindra" ho fanarahana ifotony, manao izay ezaka rehetra hanaraha-maso ny kalitaon'ny fitaovana fitsaboana amin'ny fisorohana ny valanaretina. sy fanaraha-maso, fanamafisana ny fitantanana ny risika sy ny fifehezana amin'ny vokatra atahorana be indrindra ho fifantohana, hanao ny ezaka rehetra hanaraha-maso ireo fitaovana ara-pitsaboana, ary hitazomana ny fiarovana ny fitaovan'ny fitsaboana.
Ao amin'ny 2021, ny fanjakana misahana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina dia hanamafy ny famotopotorana sy ny fikirakirana tranga, ary hamehezana mafy ireo asa tsy ara-dalàna toy ny famokarana tsy misy fahazoan-dàlana sy ny famokarana vokatra tsy misy fahazoan-dàlana, ny tsy fanarahana ny fenitra takiana na ny takian'ny teknika momba ny vokatra. Mandritra izany fotoana izany dia apetraho ny mekanika fanadihadiana sy fikirakirana milamina.
Ny orinasa no tompon'andraikitra voalohany amin'ny kalitaon'ny vokatra. Ny biraon'ny lalàna mifehy ny zava-mahadomelina dia manara-maso sy mitarika ireo mpamokatra fitaovana fitsaboana amin'ny sehatry ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina mba hahatanteraka ny andraikiny lehibe amin'ny orinasa, mandrindra ny famokarana mifanaraka amin'ny lalàna, fenitra ary fenitra teknika, manamafy ny fananganana fitantanana kalitaon'ny orinasa. rafitra, manamafy ny fitantanana anatiny ny orinasa sy ny fanofanana ny mpiasa Fanaraha-maso ny fizotry ny famokarana sy ny fanaraha-maso ny ozinina.
Nasongadin'i Wang Zhexiong fa mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fanaraha-maso fitaovana fitsaboana dia ilaina ny fampiroboroboana ny fiaraha-mitantana ara-tsosialy ary fanamafisana ny fandrindrana eo amin'ny antoko rehetra, fa koa hanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'ny ambaratonga ambony sy ambany, hampiroborobo ny fifandraisana akaiky eo amin'ny manampahefana mifehy. amin'ny ambaratonga rehetra, ary manamafy ny fanaraha-maso kalitao amin'ny famokarana, fiasa ary fampiasana fitaovana fitsaboana mandritra ny tsingerin'ny fiainana. Hamafiso amin'ny fomba feno ny rafitra fanaraha-maso sy ny fananganana fahaiza-manao.